တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: ဈေးဝယ်ထွက် ညည်းချင်း
Posted by မေဓာဝီ at 5:53 AM
ညီးချင်းပေမယ့် ဖတ်ပြီး ပြုံးဖြစ်တယ်။ မမေဓာရေးတာ လှလို့ပါ။
မမေဒါဝီ တော်တော်စာရေးကောင်းတာပဲဗျာ။ စာရေးဆရာမလုပ်ပါလား။
မမေဓာဝီဟာ အကြောင်းအရာ ရိုးရိုးစင်းစင်းလေးကို တင်ပြတဲ့ အဖွဲ့မှာ တော်တော်ပိုင်နိုင်တာပါပဲလား.. ဒီတခါတော့ ညည်းခြင်းမဟုတ်တော့ပါလား.. ညည်းချင်းပဲဖြစ်သွားပြီပေ့ါလေ.. ကဗျာက အတော်ကောင်းတယ်...
ummm that is true situation...
Living in Burma is more touch than any other countries, onion is cheaper outside than Burma compared to price, so as the other too... meat are expensive in Yangon. We haveachat with my pals here and compare to prices to Burma and the neighboring countries, Yangon living cost isabit expensive...
I can see the clear picture of prices that are mentioned in your poem.....
Goodie good indeed..
Realli nice !
1/17/2007 12:49 AM
မမေဒါဝီနဲ့ ဘလော့ဂ် ဖတ်သူများခင်ဗျား
သိပြီးဖြစ်ရင်လည်း ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီလထဲ မှာ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ King Naresuan ဆိုတဲ့ ထိုင်းဘုရင်၊ သူရဲကောင်း နရဲစွမ် (ဗြနရာဇ်) အကြောင်း ရိုက်ထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ပြပါတော့မယ်။ ဇာတ်ကားက ဟောလိဝုဒ် ဇာတ်ကားတွေလို သုံးကားတွဲကြီးပါ။ ဒါရိုက်တာက နာမည်ကြီး ဆူရီယိုထိုင်း ရိုက်တဲ့ဒါရိုက်တာ သန်းမွီ ပါ။ ဘတ် သန်း ၇၀၀ ကျော် အကုန်အကျခံရိုက်ကူးထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ မမေဒါဝီ စာစောင်အတွက် စတိုရီ တစ်ပုဒ်ရနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်လည်း စိတ်ဝင်စားတာနဲ့ ဘလော့ဂ်တစ်ခုလုပ်ပြီး Bangkok Post နဲ့ The Nation က ဒီရုပ်ရှင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ ဆောင်းပါးတွေတင်ထားပါတယ်။ http://tunmyanmar.blogspot.com ပါ။ ဘလော့ဂ်ဝင်ကြော်ငြာတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဇာတ်ကားရဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက်က www.kingnaresuanmovie.com ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားရဲ့ အမည်လိုဂိုနဲ့ အမှတ်တရပစည်းလေးတွေနဲ့ ပိုစတာကြီးတွေ ဈေးဝယ်စင်တာတွေနဲ့ ကုန်တိုက်ကြီးတွေမှာ တွေ့နေရပါပြီ။ ဇာတ်ကားပိုစတာက အရမ်းမိုက်ပါတယ်။ မှုန်ပြပြနောက်ခံမှာ ပုဂံ ဘုရားပုထိုးပုံတွေလည်းပါပါတယ်။
မမေတို့များရေးတတ်လိုက်တာနော် ညလေးတို့ဆို ဘယ်လိုရေးရမယ်မှန်းမသိဘူး တော်တယ်ဗျ
its really good sis